Ngaba ishishini lakho lenza nayiphi na kwezi mpazamo kwimidiya yoluntu? | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 16, 2014 NgeCawa, ngo-Novemba 16, 2014 Douglas Karr
Ukusukela ukuba amaqhinga eendaba ezentlalo aqhubeka nokuvela, izixhobo zohlalutyo ziyaphucuka, kwaye ndiyaqhubeka ukumangaliswa yinto esebenzayo nengasebenziyo - ndihlala ndingabaxeleli abantu ukuba benza into Ephosakeleyo kwimidiya yoluntu. Yintoni enokuba yimpazamo kumda wam wexesha inokuba sisicwangciso esikhulu kuwe. Kuxhomekeka ikakhulu kulindelo lwabaphulaphuli bakho nokuba uyaluzalisekisa olo lindelo.
Oko kuthethiweyo- kukho izinto ezisisiseko ezisisiseko ekufuneka zonke ishishini zigcine engqondweni kwaye UJason Squires wenze umsebenzi oqinileyo wokubabonisa apha kule infographic.
Nazi iimpazamo ezi-5 eziphezulu - funda i-infographic yezinye!
Ukujolisa kubungakanani babalandeli ngaphezulu uphawu
Ukongeza kwifayile ye- ingxolo
hayi guqula abalandeli bakho
tags: iimpazamo kushishino kwimidiyau-jason squiresmpazamoImidiya yokuncokolaiimpazamo kwimidiya yoluntu